Iqela elimnandi lihlala lilonke Floor4 amagumbi 8 Iindwendwe - I-Airbnb
Iqela elimnandi lihlala lilonke Floor4 amagumbi 8 Iindwendwe
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguPaul
sinikezela ngeendawo zokuhlala ezitofotofo ezilishumi elinambini. Abasebenzi abanamava nabanobuhlobo babonelela ngenkonzo eyenzelwe wena eyenzelwe iminqweno yakho eyodwa ukuqinisekisa ukuba uziva utofotofo kwaye ukhululekile ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho.
Nganye yee-suites ineebhedi ezitofotofo, iithelevishini ezinkulu ze-flat-screen ezineziteshi zesathelayithi zamazwe ngamazwe, kunye nezihlalo zomntu kwiibhalkhoni ezijongene noMlambo i-Chapora. Zonke iisuti zibonelela nge-Wi-Fi yokufikelela kwi-Intanethi ngesantya esiphezulu.
Isidlo sakusasa siya kuhlawuliswa
Amava angaphelelwa lixesha alindele iindwendwe kwihotele yethu ye-boutique ebekwe kwiindonga ezintle zomlambo i-Chapora ebonelela ngemekobume yoxolo nokuba wedwa kwenye yezona ndawo zidlamkileyo zeGoa. Sinikezela ngemibono yokuphefumla kumanzi angasemva eMorjim kwaye kukumizuzu nje embalwa ukusuka elunxwemeni. Ilali ekufutshane yaseMorjim enamakhaya ayo anqabileyo kunye namakhaya anqabileyo kunye nemeko yeminyaka yamandulo yindawo entle yokubaleka.
Ifumaneka kuMntla weGoa elunxwemeni lomlambo ozolileyo nobukekayo weChapora, kwimizuzu nje embalwa ukusuka kulwandle oluhle iMorjim ekwaziwa ngokuba yi "Turtle Bay" kunye neemayile zayo zesanti emhlophe kunye nendawo yokuhlala ekhuselweyo yeOliver Ridley Turtle. Ilali ekufuphi yaseMorjim enamakhaya ayo anqabileyo kunye namakhaya kunye nemeko yeminyaka yakudala intle kwaye yongeza umtsalane weholide kwindawo epholileyo.
Olu ludibaniso lwamagumbi ama-4 kumgangatho ofanayo kwaye lufanelekile ubuninzi babantu abali-12.
Iintsuku eziyi-7 e Morjim
Ilali ezolileyo yaseMorjim ngumzekelo ogqibeleleyo wobomi baseGoan, apho ulimo lwemveli lusalawulayo. Iikhokhonathi, iicashew, iitshilisi kunye namasimi erayisi alinywa ngokuncinci ukusetyenziswa kwezixhobo zala maxesha - amasimi asahlakulwa ngeenkabi - ngelixa ifula, iinkomo, izikhephe zokuloba kunye nokunqongophala kophuhliso lwangoku lwezakhiwo kwenza imekobume apho ivakala ngathi lixesha. uye wema bhuxe.
Uphuhliso oluqhubekayo loshishino lwabakhenkethi lwale ndawo lukhokelele ekuveleni kwemisebenzi emininzi yasemini ukuze uyonwabele xa uzele iilwandle ezintle zasekhaya, ezinje ngeyoga, ukucamngca, i-massage ye-ayurverdic kunye nonyango lwe-homeopathic kunye ne-spas. Iilwandle zineebhari ezininzi zokuphumla, amatyotyombe kunye neendawo zokutyela, ngelixa nje ukuba ilanga litshonile kukho iiklabhu zasebusuku ezininzi ezinoo-DJ abadumileyo kwihlabathi kuluhlu lwabo ubusuku ngabunye. I-Arambol ikwasemantla apho uya kufumana amaqela amaninzi aqhubeka kude kube ngorhatya.
Ukuhamba nge-15km emazantsi kwindlela engaselunxwemeni kuya kukhokelela ekubeni ube namava okubukela kunye nezandi ze-Baga ukuya kwi-Calangute strip. Abahambi banokundwendwela iicawe zenkulungwane ye-19, bajonge inqaba yakudala e-Aguada, batye kwiindawo zokutyela ezilungileyo okanye badanise ubusuku bonke phantsi kweenkwenkwezi. Ukuba unethemba lokuthenga, yiya kwiMarike yeAnjuna edumileyo ngexesha lasemini ngolwesiThathu okanye iMarike yangoMgqibelo ebusuku e-Apora, zombini ezibonelela ngoluhlu olukhethekileyo lwamazwe ngamazwe lobugcisa, ubugcisa, iimpahla, ubucwebe, ukutya kunye nokuzonwabisa okuphilayo.
Abasebenzi bethu baya kuba lapha ukunceda ngexesha lokuhlala kwakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Morjim